Izindaba - Uhlobo Luni Likawoyela Oluthathwa Yimoto Yami?
Ukunquma uwoyela wezimoto ongcono kunayo yonke emotweni yakho noma ngabe ingxube yokwenziwa, yokwenziwa, imileage ephezulu noma uwoyela ojwayelekile, kuya ngezici ezithile. Ezinye zezinto ezingaphandle, njengesimo sezulu ohlala kuso, imikhuba yakho yokushayela, noma iminyaka yobudala benjini yakho. Ezinye izinto zilungiswa ngokuya ngohlobo lwenjini yemoto yakho kanye nemininingwane yomkhiqizi. Lokhu kungaba ngaphezu kokufuna ukwazi ngezinhlobo zamafutha asetshenziswa ezimotweni, kodwa kushiyele kwaFirestone Complete Auto Care ukukunikeza imininingwane ephelele ngemoto yakho. Akudingeki ukuthi ube yingcweti kuwoyela wezimoto. yingakho silapha. Vakashela noma yenza i-aphoyintimenti esitolo sakho seFirestone Complete Auto Care namuhla. Ochwepheshe bethu bamathayi nabezimoto bahlala bekulungele ukukusebenzela!
Izinhlobo Zamafutha Kawoyela
Kunezinhlobo ezine zamafutha kagesi jikelele:
Okugcwele Zokwenziwa Motor Amafutha
Uwoyela ogcwele wokwenziwa ulungele izimoto ezifuna ukusebenza kwezinga eliphakeme namazinga aphezulu wokuthambisa. Uwoyela ogcwele wokwenziwa uhlinzeka ngamazinga aphezulu e-viscosity, ukumelana ne-oxidation nokonakala okushisayo, futhi kusiza ukulwa nodaka lwamafutha. Futhi, kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kahle kukaphethiloli futhi kungakhuphula namandla emoto ngokunciphisa ukudonsa kwenjini.
Ngoba uwoyela wezimoto zokwenziwa ungabiza kabili noma kane ngaphezu kukawoyela ojwayelekile, khuluma nochwepheshe wakho mayelana nokuthi uwoyela ofanele wemoto yakho yini. Uma uhlala esimweni sezulu esinobusika obubanda kakhulu noma ehlobo elishisa kakhulu, noma usebenzise imoto yakho ukudonsa noma ukuhudula, uwoyela wokwenziwa kungaba uhlobo oluhle kakhulu lwamafutha emotweni yakho. Izinjini ezindala zingasizakala nakwoyela wokwenziwa, ngoba kungasiza ekuvikeleni ukwakheka kodaka oluyingozi ezinye izinjini ezindala ezibonakala zithambekele kuzo.
I-Synthetic Blend Motor Oil
Uwoyela wenhlanganisela yokwenziwa unikeza okuhamba phambili kwemihlaba yomibili. Inezici eziningi zikawoyela ogcwele wokwenziwa, kepha ngentengo ephansi kakhulu. Lolu hlobo lwamafutha luyingxube yamafutha asetshenziswayo futhi ajwayelekile, kanye nezinye izithasiselo, ukumelana ngokwengeziwe ne-oxidation nezindawo ezinamazinga aphansi okushisa aphansi. Izinhlanganisela zokwenziwa zenza kube lula kubashayeli ukwenza ushintshi kusuka kofulawa owenziwe ngendlela evamile, yingakho lolu hlobo lwamafutha luya ngokuya luthandwa kakhulu phakathi kwabashayeli banamuhla ababukisisa. Futhi kuyindawo enhle emaphakathi yabashayeli abafuna ukuvikelwa okwengeziwe nokusebenza kukawoyela wokwenziwa, kepha kungenzeka bangakulungeli ukufaka umthethosivivinywa wokushintshela kuwoyela ogcwele wokwenziwa.
Ojwayelekile Amafutha Amafutha
Uwoyela ojwayelekile wuwoyela osetshenziswa kakhulu. Ilungele ukusetshenziswa okulula, izimoto ezihamba emuva kwesikhathi ezinamamayela aphansi kuya kwesilinganiso kanye nenjini elula.
High Mileage Motor Amafutha
Uwoyela we-mileage ephezulu wenzelwe ngqo izimoto ezinamamayela angaphezu kwama-75,000. Lolu hlobo lukawoyela lungasiza ekwehliseni ukusetshenziswa kukawoyela, kunciphise ukuvuza namanzi asohlayo, futhi kungasiza ekwehliseni intuthu nokukhishwa ezinjini ezindala.
Izinhlobo Zezithasiselo Zikawoyela
Amafutha wezimoto ngokuvamile afaka izithasiselo ezimbalwa ezingakha phakathi kuka-5% no-30% wamafutha. Lezi zithasiselo zisiza ukuthuthukisa ukusebenza kukawoyela. Ama-motor oyela angafaka izithasiselo ezilandelayo:
Ama-antioxidants: Izithasiselo ze-Antioxidant zisebenza ukunciphisa i-oxidation nokwakhiwa kwamadiphozithi ku-oyela wezimoto. Zisiza futhi ukugcina injini ihlanzekile futhi zandisa impilo kawoyela wezimoto.
■ Ama-anti-wear agents: Ama-anti-wear agents asiza ukuvikela izingxenye zenjini ezithinteka ikakhulu ekushiseni okushisa kakhulu, njengezindonga zamasilinda, amalifti, amakhamera namasongo e-piston. Lesi sengezo sisebenza njengolwelwesi oluvikelayo oluzungeze lezi zingxenye ukukhawulela ukungqubuzana ezimweni zensimbi nensimbi.
Ama-detergents: Lesi sithasiselo asifani ne-detergent yakho yokuwasha! Igxile ekuvikeleni ukufaka imali, ukugqwala, nokugqwala ekwakhiweni kwendandatho ye-piston, i-piston under-crown, nakwezinye izindawo ezivame ukushisa ngokweqile.
■ Abahlakazekile: Lesi isithako somlingo sikawoyela wakho. Inika uwoyela wakho amandla okumunca nokubamba ukungcola okuqinile ukuze kungalimazi injini.
I-foam inhibitors: Lesi sithasiselo senza lokho okuzwakala sengathi kunjena. Ama-foam inhibitor agcina uwoyela wezimoto ungakha amagwebu namagwebu. Ukube bekungenzeka amagwebu namabhamuza, uwoyela ubungeke ukwazi ukumboza izingxenye ezibalulekile zenjini bese uyigcina ipholile.
Izinguquko ze-Friction: Izinguquko ze-Friction zisiza ukunciphisa ukungqubuzana lapho injini yakho isebenza ngaphansi kwamazinga okushisa aphezulu futhi inemithwalo esindayo. Lesi sengezo singakusiza ukuthi ukwandise ukusebenza kahle kwephethiloli.
Ama-depressants we-Pour-point: Lesi sithasiselo asihlangene nakancane nokuthela uwoyela wakho uqobo. Eqinisweni, ama-depressant depressants asiza ukuvimbela izinhlayiya ze-wax emafutheni ukuthi ziqine ezimweni ezibandayo. Ngenxa yalokhu, uwoyela wezimoto ugeleza ngokukhululeka ngisho nasezingeni eliphansi, emazingeni okushisa abandayo futhi injini ayidingi ukusebenza kanzima ukuyipompa.
■ Ukugqwala nokuvimbela ukugqwala: Izingxenye zangaphakathi zenjini yakho zingagqwala futhi zonakalise lapho zivezwe ama-asidi nomswakama. Lezi zithasiselo zenza ifilimu evikelayo ngaphezu kwezingxenye zangaphakathi zenjini yakho ukusiza ukuvimbela umonakalo onjalo.
■ I-viscosity-index ngcono: Lezi zithasiselo zisiza uwoyela wakho wenjini ukuthi wenze njengoba kuhlosiwe naphezu kokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Abicah Rubber Seal, Izingxenye ezisele, Lawula i-Arm Bushing, Isesekeli Esizenzekelayo, Uphawu Ingxenye, Clamping Element,